IMITHI YOTHANDO ENAMANADLA | Chief Alexander – +2778 181 1422
You are here: Home » voodoo » IMITHI YOTHANDO ENAMANADLA
IMITHI YOTHANDO ENAMANADLA
Posted: 1:56 pm, February 6, 2015 by Admin
Imithi esebenzayo nenamandla yiyiona kanye eyenza ushintsho ezimpilweni zabantu. Ikakhulukazi uma siza kwezothando. Angeke sikubuyisele eceleni ukuthi uthando lubaluleke kanjani ezimpilweni zabantu. Yilo kanye ke uthando lolu oludinga amandla emithi ukuze izimpilo zabantu zihambe ngendlela okuyiyo. Imithi yothando isuka nawe ekuqaleni usafuna umuntu okuwuyena isthandwa senhliziyo yakho, ibe nawe usunaso leso sthandwa sakho kuze kube ninquma ukuba ndawonye okuwumshado phela.
Isimonyo esinye semithi esebenza kakhulu ezinsizweni ezifuna uthando. Phela ngokwesizulu kujwayelekile ukuthi izinsizwa okuyizona ezicela uthando ezintokazini bese kuba ukuthi intokazi izizwa kanjani ngaleyonsizwa leyo. Kube sekuba kubike insizwa isiyitholile intombi eyizwa ngaphakathi kepha intombi yale iphethe ukunika insizwa ithuba. Yingakho ke nje kunemithi yezinsizwa okumele ziyisebenzise ukuze zikwazi ukuthola umuntu ezimdingayo empilweni yazo.
Kepha ke kuye kube nezinto ezithize okumele uzenze ukuze ukwazi ukuba sesimweni sokusebenzisa imithi yothando futhi ikusebenzele. Lapha sikhuluma ngezinto ezozohlamba wena nomzimba wakho. Ukuqala kwezinto zonke nje kuqala ekuphalazeni. Yebo phela ukuphalaza yinto eyenziwa ngezikhathi zasekuseni umuntu engakadli. Emva kwalokho kube sekuba ukugquma. Lapho ke usuke usuqinisekisa ukuthi kuphuma konke okuyisichitho nesikhwakhwalala kanye nesigcwagcwa osuke ufakwe sona. Uye uthi ke uma uqeda ukugquma bese uyageza ngawo lomuthi ogqume ngawo bese uyochitha ngaphandle.
Kube sekuthi emvwa kwalokho bese uyayisebenzisa ke lemithi ukuze uthole lo umfunayo empilweni yakho. Kuye sekuba indumazo ke uma usuthola abafana sebesebenzisa lelithuba ukuthi baxhaphaze izingane zabantu. Angeke phela sakuphika nokuthi amantombazane anamuhla aselahlekelwe isimilo asevele avume nje ebafaneni kodwa ukuthi kusetshenziswe lemithi ukuze ube nezimtobi inqwaba akukho nje esimweni esifanele.
Zithoele yonke imithi esebenzayo kudokotela wangempela wemithi yothando namuhla. Ungabe usawapholisa amaseko.
Tags: imithi,imithi esebenzayo,imithi yesizulu,imithi yothandi